कहिलेकाँही म आफैलाई हाँस्दछु! | Martech Zone
कहिलेकाँही म आफैलाई हाँस्दछु!
आइतवार, सेप्टेम्बर 3, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मैले तपाईंलाई मान्छेहरुलाई भन्नु पर्दछ ... मलाई लाग्छ मेरो अन्तिम पोष्ट मैले लेखेको सबैभन्दा रमाईलो थियो। तपाईं जस्तो गर्नुपर्छ हेडरमा मेरो तस्वीर हेर्नुहोस्, म धेरै विरलै आफूलाई गम्भीर रूपमा लिन्छु। साथै, विगतमा मैले अरूको बारेमा तपाईको बारेमा के भन्छ तपाईको सफलताको मापन गर्ने बारेमा के सोच्दछु त्यस बारेमा मैले लेखेको छु। एक ब्लगको सफलता बाहिरी मापन गर्न सक्दैन, केवल तपाईं द्वारा!
यसका साथ, मैले स्वीकार गर्नु पर्छ कि मैले तपाईंहरू सबैलाई जितेको छु। म मेरा पाठकहरूको प्रतिक्रिया र ब्लगोस्फीयर हेर्न चाहान्थें ... जब मैले मेरो भयानक शीर्षक लेखेको थिएँ भनेमेरो ब्लग तपाईको ब्लग भन्दा राम्रो छ'। यो गालामा पूरै जिब्रो थियो, तर मैले प्रतिक्रिया देख्नुपर्‍यो। यो एकदम हास्यास्पद थियो! (कृपया ... म तपाईंलाई हँस्दैछु म तपाईसँग हाँस्दैछु, तपाईमा होइन!))। केही व्यक्तिहरू मेरो लागि नराम्रो महसुस गर्थे, केहि ममाथि उफ्रिएका थिए, कोहीले त्यसपछि उनीहरूको रेटिंगलाई मेरो मूल्या to्कनसँग तुलना गरे, र कोहीले भने कि श्रेणीकरणसँग ब्लगको राम्रोसँग कुनै सम्बन्ध छैन।
म कहिलेकाँही चलाख हुन चाहन्छु कि प्रतिक्रियाहरू छन् ... तिनीहरू भन्छन् जस्तै भाँडो हलचल गर्नुहोस्। सायद यसको मजेदार अंश (मलाई आशा छ कि म केवल एक मात्र चुकलिंग हुँ), यो हो कि यस प्रविष्टिको लोकप्रियताले मलाई टेक्नोराटी रैंकिंगमा # ,०,१70,178 सम्म पुर्‍यायो।
त्यसो भए, एक मार्केटरको रूपमा, मलाई लाग्छ कि यसले केहि चीजहरूमा औंल्याउँछ।
क्रिस बगगट एक पटक मलाई भन्यो कि कहिलेकाँही यो तर्कको मध्यमा रहनु राम्रो हो र प्रतिक्रियालाई उत्तेजित पार्दा कम्पनीको रणनीतिको साथ लामो समयसम्म मद्दत गर्न सक्छ। उसको मतलब हेराफेरीको मतलब छैन ... उसको साधारण अर्थ यो छ कि यसले तपाईंको सामानहरू प्रदर्शन गर्ने अवसर ल्याउँदछ। यस उदाहरणमा मलाई लाग्छ यो काम भयो!
कहिलेकाँही केवल सुझाव दिईन्छ कि तपाईं वास्तवमै काम गर्न सक्नुहुने भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। यो, सायद, एक दुख्खा सत्य हो कि हामी मार्केटिंग द्वारा हेरफेर गर्न सकिन्छ। भन्नुहोस् कि तपाई # १ हुनुहुन्छ र हुनसक्छ कुनै दिन तपाई आउनुहुनेछ!
हुनसक्छ केही महिनामा म लुकेर आक्रमण गर्नेछु र मार्केटिंग अटोमेसनमा नम्बर १ ब्लाग हुँ र म कहाँ हुन्छु भनेर हेर्छु। अहिलेको लागि, यद्यपि, म मात्र खुशी छु कि मैले तपाईंको अन्तिम प्रविष्टिमा मैले कुनै पनि गुमाइनँ!
मेरो ब्लग अन्य सबै ब्लग को .99.86 XNUMX. !XNUMX% भन्दा राम्रो छ!
मगरमच्छ हन्टर, स्टीव इरविन 44 XNUMX मा मारिए